Indlela yokugqoka ilutsha ebusika
Ukulindela ukongeza kwintsapho ngumzuzwana wovuyo kunye noxanduva. Ingqalelo ngokucokisekileyo kufuneka ufike kuye ukuba umntwana uza kuzalwa ngeenyanga zasebusika, ekubeni kulo mzekelo kubalulekile ukwazi ukugqoka ilutsha ebusika.
Iimfuneko eziqhelekileyo zeengubo ezisanda kuzalwa
Kwiintsana, kufuneka ukhethe iingubo eziza kuhlala kuwo ngokukhululekile. Yenziwe kwindwangu zendalo, ukuze isikhumba somntwana "siphefumle". Ukukhetha ukunika ikotoni engcono, ilinen, iingubo, i-flannel. Ukunyamekela kufuneka kuthathelwe ukukhetha iimpahla zangaphantsi. Izambatho kufuneka zibe lula ukugqoka kwaye kulula ukususa. Ezi zinokuba yizhonhon, i-cap, i-slide, i-overalls, iikhoti. Icandelo lamanje lamastile sele lifikelele kwinqanaba apho iimpahla ezifanayo ziveliswa ngokusebenzisa "ubuchwephesha" obubugcisa. Ingubo yokugada yomntwana kufuneka kwakhona yenziwe ngeempahla ezifudumeleyo, ezinjengamabalaphu, iimfumba, iimpahla zokuhamba, ezenziwe ngeentsimbi eziluhlaza, uboya. Ngenxa yokuba le nto "iphefumula", igcina ishushu.
Indlela yokugqoka umntwana webusika xa esekhaya
Iqondo lokushisa eliqhelekileyo kufuneka lizinze kwi-22-23 degrees Celsius. Eli yimeko ekhululekile yokuhlala komntwana. Ngethuba lokuvuka, kunokwenzeka ukuba ugqoke umntwana nge-slider, okanye i-overalls. Ukuba izinga lokushisa ekamelweni liphantsi, ungaphonsa isambatho semisonto eboyiweyo okanye i-overalls phezulu. Kwiemilenze ezifakwa kwiisokisi. Indlu akufanele ifake ii-caps kunye ne-caps kwintsana, intloko ifanele iphefumule. Ngexesha lokulala, umntwana kufuneka ahlale ehlanganiswe ngengubo.
Yintoni ekufuneka ibe yimpahla yengane esandula ebusika ukuhamba
Ukuphuma kunye nosana olusanda kuzalwa ebusika ukuhamba, kufuneka ubone ukuba imozulu ingaphandle kwefestile. Xa kunesithwathwa esinzima, iqhwa okanye imvula, okukhethwa kukho kukuhlala ekhaya. Ukuba imozulu ilungile, siyahamba kwaye siya.
Ebusika, ukuhamba ngaphandle, imvulophu iya kuba yinto ekhethekileyo yokugcina impahla yangaphandle. Kulula kakhulu ukuguqula umntwana kuyo. Kukulungele umntwana ngokwabo, kuba akayi kukuthintela ukuhamba kwakhe. Iimvulophu zabantwana zintlobo ezimbini: ezinye zisebenzise njengeengubo, iyesibini njengejacket okanye ii-overalls. Iimvulophu ezinjalo zenziwa ngoncedo lwezobuchwepheshe zanamuhla kunye nokudibanisa kweempahla ezintsha kunye neentsimbi. Bakukhanya kwaye babulela ukubonga kwabo abavumelanga umswakama, umoya kunye nokukhusela kubanda. Benza nabo beboya bezimvu, buxhasa ukulinganisela kwe-thermo yomzimba womntwana. Ngumntwana, ngenxa yazo zonke ezi ndawo, uya kuziva ucolile kwaye ukhululekile. Ukulungeleka, entloko yintsana uqale ufune ukubeka i-bonnet, kwaye sele usuphezu kwentsimbi efudumele.
Isana kufuneka sigqoke ingubo zangaphantsi ezifanayo apho ahamba khona ekhaya, ngaphezulu kwee-overalls okanye i-suit, ehlanganisa izibambo kunye nemilenze. Ukukhethwa kwengubo kufuneka kwenziwe ngokuxhomekeka ekubeni kufudumele okanye kubanda ngaphandle kwangoko. Ukuba ukushisa kungaphezulu kwezinga, awukwazi ukulinganisela ukuhlala komntwana kunye "nocando" olongezelelweyo lweengubo zangaphandle. Ukuba ngaphantsi kwesantya, ukugqoka umntwana osandul 'ukuzalwa kufuneka kube nokufudumala kunokwenzeka kwaye udibanise umntwana ngokufaka ingubo efudumeleyo.
Ukuphuma, ugqoke umntwana wakho umfudumalo kunokuba uqobo. Ngoko ke, okokuqala kufuneka uguze ngokwakho, uze ugqoke umntwana ukuze ungapheli ngaphezu kokuphuma emoyeni.
Qinisekisa ukuba ukhetho olufanelekileyo lwezambatho zokuhamba lulula. Kufuneka ukuba uthinte intamo okanye umva kumntwana. Kufanele kubefudumale, kodwa kungabi manzi. Ukuba itshisa okanye imanzi, ithetha ukuba uyibeke ngokufudumele. Mthinte iingubo kwaye uvumele umntwana abuyele kwinto evamile ukwenzela ukuba angabonakalisi kubanda kwisitalato. Ukujonga ukuba umntwana ubanda, chukumisa umtshini. Ukuba kubanda, i-crumb iqhwa. Ugqoke ngokufudumele. Kuyafaneleka ukuba impumlo yengane ifudumele.
Ingozi yokuxilisa ixesha elide
Ungazi njani amazinyo anqunywe: iimpawu zento
Ixesha lokuqala kweenwele zomntwana
I-Lullaby yengane, umculo wokucamngca nokuphumula
Ukuhlamba umntwana ekuhlambeni
Ingubo yokugqoka yasehlobo
Iimpawu kunye nesondlo esifanele kwi-cholelithiasis
Indlela yokutshabalalisa ubudlelwane
I-Pizza kunye ne-eggplant kunye neminqumo
Iingcebiso zengqondo: Ngaba kufuneka uvume ukuhlaselwa?
Amanzi ashushu avela kubakhiqizi abahlukeneyo: ukungafani kunye neendlela zokwenza isicelo
Kutheni umfana engafuni ukutshata?
Ukulungiselela njani iyeza kwi-viburnum?
Ukufihla imilenze ephosakeleyo
Zonke iifayile zendlela yokupakisha kwintsimbi
Indlela yokufundisa umntwana ukuba azimelele
Konke malunga noboya obumnyama kunye obomvu
Amaphengwane avela kwiminqumo
Ubumnandi kunye nokunethezeka: i-swimwear nge-crystals kunye ne-crystals e-Zlatova
Isaladi yamaGrike ye-cherry tomate
Ungayitshintsha njani imeko ebusweni